पुनः संक्रमणको जोखिम कति ? « Image Khabar
पुनः संक्रमणको जोखिम कति ?
नेपालमा पनि पुनः संक्रमणको जोखिम
काठमाडौं, कात्तिक २४ । कोरोना महामारी रोकिने कुनै छेकछन्द छैन । केही देशहरुमा एकपटक संक्रमित भइसकेको व्यक्ति पुनः संक्रमित भएको खबर सार्वजनिक भएका छन् । नेपालमा भने पुनः संक्रमणको पुष्टि भएको छैन ।
एकपटक संक्रमित भएको व्यक्ति पुनः संक्रमित भए कस्तो जटिलता आउन सक्छ या प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भइ अवस्था सामान्य नै रहन्छ ? यसबारे विज्ञहरुकै धारणा फरक–फरक छ ।
विश्वभर नै कोरोना पुनःसंक्रमणको बहस चलिरहेको छ । नेपालमा आधिकारिकरुपमा ‘केस’हरु बाहिर नआएपनि पुनः संक्रमणको केसहरु फाट्टफुट्ट देखिन थालेका छन् ।
हङकङका ३३ वर्षीय पुरुषमा पहिलोपटक पुनः कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
त्यसैगरी, दोस्रोपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी नेदरल्यान्ड्सकी ८९ वर्षीया महिलाको कोरोनाकै कारण मृत्युसमेत भयो ।
यी घटनाहरुपछि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएपछि रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता र एन्टीबडीले कति समयसम्म काम गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर, पुनः संक्रमण पहिलो संक्रमणभन्दा भिन्न र जटिल हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा विशेषज्ञहरु नै अलमलमा छन् ।
विभिन्न मुलुकमा गरिएको अनुसन्धानहरुले कोभिड–१९ विरुद्ध प्राप्त रोगप्रतिरोधी क्षमता तीनदेखि पाँच महिनासम्ममात्र रहने देखाएको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका संयोजक तथा सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले केही मुलुकहरुमा कोरोना पुनः संक्रमणको केस देखिइसकेकोले पुनः संक्रमणको अवस्थालाई नर्कान नसकिने बताउनुहुन्छ ।
कोरोनाभाइरसको ‘जीन’ परिवर्तन भएपछि एकै व्यक्तिलाई पुनः संक्रमण हुने गरेको डा. पुन बताउनुहुन्छ ।
डा. पुनले नेपालमा कोरोनाभाइरसको जीन परिवर्तन भएको आधिकारिकता पुष्टि नभएपनि परिवर्तन भएको अनुमान गरिएको भन्दै नेपालमा पनि पुनः संक्रमणको जोखिम रहेको बताउनुहुन्छ ।
कोरोनाभाइरस पुनः संक्रमणपछि केहीमा सामान्यदेखि गम्भीर लक्षणहरु देखिएको डा. पुनको भनाइ छ ।
पुनः संक्रमण हुँदा स्वास्थ्य अवस्था जटिल या सामान्य के हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी आइनसकेको डा. पुनको भनाइ छ ।
यता, जनस्वास्थ्यविद्को भने फरक दाबी छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे एकपटक कोरोना संक्रमण भएर निको भएकालाई पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून रहेको र भइहालेपनि जोखिमको सम्भावन कम हुने दाबी गर्नुहुन्छ ।
निको भइसकेका व्यक्तिमा पुनः संक्रमण भए यसले आगामी दिनमा थप चुनौती खडा गर्ने विषयलाई नकार्न भने सकिँदैन ।
थपिए ३०८ संक्रमित, ३ जनाको मृत्यु